May 2016 - Page 30 of 30 - iftineducation.com
iftineducation.com – Qayb wayn ayuu dhaqdhaqaaqa jirku ka yahay wada hadalka labada qof, sida madaxa marka la luxayao oo macnaheedu noqon karto “haa” ama “maya”. Inaga oo aan ogayn ayaan dhaqdhaqaaqa jirkeena ku muujinaa dareenkeena iyo waxa aan ku fikrirayno. Waa kuwan calaamdaha aad ka arki kartid in qofka aad is gaad gaadaysaan ku xiisaynayo iyo inkale Hadii qofka balanka aad…
iftineducation.com – Haddii aad tahay gabar reer leh, isla markaana ku mamman taleefoonada caaqilka ah, ogow waxaad halis ugu jirtaa inuu reerkaaga burburo, sidaasi waxaa lagu caddeeyay daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka. Daraasadda ayaa sheegeysa in 75% haweenkii ka qeybgalay ay isku raaceen in taleefoonnada caaqilka ah (smartphones) ay fara­gelin weyn ku yeesheen jacaylkooda. Haweenku waxay sheegeen in taknooljiyadu ay yareysay…